Tenga Yakasununguka Pazasi Flat Transparent Yevakadzi Masiraidhi - Mahara Kutumira & Hapana Mutero | WoopShop®
Anonyaradza Akadzika Pasi Flat Transparent Yevakadzi Masiraidhi
ruvara goridhe sirivha Nhema
Ndarama / 41 Ndarama / 39 Ndarama / 40 Sirivheri / 38 Sirivheri / 39 Nhema / 41 Sirivheri / 37 Ndarama / 37 Ndarama / 38 Sirivheri / 40 Sirivheri / 41 Nhema / 39 Nhema / 40 Nhema / 37 Nhema / 38
Anonyaradza Akadzika Pasi Flat Transparent Yevakadzi Masiraidhi - Ndarama / 41 yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Nzvimbo Yepamusoro: Simbisa Tsvina
Sandal Type: Yekutanga
Lining Chinyorwa: Hapana
Fashoni Element: Yakadzika
Insole Chinyorwa: Eva
Saizi 7 = 37 inokwana kureba kwetsoka iri 23.5cm.
Saizi 8 = 38 inokwana kureba kwetsoka iri 24cm.
Saizi 9 = 39 inokwana kureba kwetsoka iri 24.5cm.
Saizi 10 = 40 inokwana kureba kwetsoka iri 25cm.
Saizi 11 = 41 inokodzera tsoka tsoka ndeye 25.5cm.
Ongorora: Ndokumbira upimise tsoka yako kureba uye verenga saizi tafura pazasi zvakanyatsonaka. Kureba kwetsoka hakuna kureba, uye zvakare haisi urefu hweshangu mukati. Kana tsoka yako yakakora kana yakafara, tinokurudzira kuti usarudze saizi imwe yakakura. Kazhinji, Mukati kureba = tsoka refu + 0.5 ~ 1.5cm
Yakakwana, yakakosha uye chaiyo muhukuru. Kutumira nekukurumidza kuCanary Islands
Kurumidza kuendesa, mhando yakanaka, maita basa